Pique oo si layaab leh uga falceliyay go’aankii tababare Zidane uu ku diiday in kooxdiisu ay sacbiso Barcelona – Gool FM
Pique oo si layaab leh uga falceliyay go’aankii tababare Zidane uu ku diiday in kooxdiisu ay sacbiso Barcelona
Liibaan Fantastic April 8, 2018
(Barcelona) 08 Abriil 2018 Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa si layaab leh uga falceliyay go’aankii tababaraha Real Madrid uu ku diiday in loo sacbiyo Barca.
Sida sharcigu uu dhigayo, Real Madrid waxaa waajib ku ah inay safgalaan oo marin sharfeed ay u sameeyaan ciyaartoyda Barcelona kulanka 6-da May lagu ciyaari doono Camp Nou, laakiin waa haddii Barcelona ay xaqiijiso ku guulaysiga La Liga ka hor kulankaas.
Tababare Zidane ayaa si cad u diiday in kooxdiisu ay u sacbiso Barcelona, wuxuuna sheegay in kooxda tababare Valverde ay horay u burburisay sharcigaas kadib markii kooxdiisu ay soo qaaday koobka kooxaha adduunka bishii December.
Kadib guushii Barcelona ay xalay ka gaartay kooxda Leganes ayaa la waydiiyay Gerard Pique waxa uu ka leeyahay warka ka soo yeeray tababare Zidane, wuxuuna yiri:
“Ma seexan karo caawa sabab la xiriirta hadaladii uu yiri Zidane”.
Kulankii hore ee El-Clasico ayaa lagu qasbay Barcelona inay marin sharafeed u samayso Real Madrid laakiin Barca ayaa ku dooday in Real aysan ku guulaysan koob ay kawada qaybgalayeen sidaas darteedna aysan sharci ahayn inay u sacbiyaan.
Real Madrid ayaana dhankeeda haatan ku doodaysa in Barcelona ay horay u burburisay sharcigaas isla markaana aysan u samayn doonin dhankooda marin sharafeed.
Messi oo soo barbareeyay Rikoor uu horay u sameeyay Ronaldinho
"Qiimaha Pogba kor ayuu u kacay kadib kulankii City" - Mourinho oo ku jees jeesay Guardiola